Mahatso-po ny Fo Masin’i Jesoa
P. Guillaume il y a 3 années
Natokana hitodihana manokana amin'ny Fo Masin'i Jesoa ny fotoana mandritra ny volana jiona iray manontolo. Indro zaraina amintsika ny lahatsoratra hita tao amin'ny Lakroa laharana 3924, alahady 14 jiona 2015.
Fiangonana vaovao no tsangambaton'ny faha 100 taonan'ny EKAR Masindahy Zozefa
﻿Cathy il y a 3 années
Nitsidika ny fiangonana Md Zozeafa ao Andaingo i Monsenera Gaetano Di Pierro. Sorona Masina notarihin’i Mgr Gaetano Di Pierro tamin'ny alahadin'ny Pantekoty no namaranany ny fitsidihana. Hisy fiangonana vaova haorina ao antoerana.
Ny anjara toeran’i Masina Maria sy ny vehivavy ao amin’ny Fiangonana
Natokana hitodihana manokana amin'i Masina Maria ny volana mey. handinihana bebe kokoa ny anjara toeran’ny vehivavy ao amin’ny Fiangonana sy fiarahamonina ary ny tantaram-pamonjena. Lahatsoratra nivoaka tao amin'ny Lakroa 3 mey teo p. 13.